non-Ferro Metals, Ferro သတ္တုစပ်, အပိုင်းအစ - Huaxin
ကင် moly အာရုံ molybdenum အောက်ဆိုဒ် MoO3
Chrome ကအောက်ဆိုဒ်အစိမ်းရောင် Cr2O3
ခရိုမီယမ်သတ္တု CR သတ္တု Chrome ကိုသတ္တု aluminothe ...
Huaxin အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောက်သည်က Non-Ferro Metals များ၏ကျယ်ပြန့်, Ferro သတ္တုစပ်များကိုထောက်ပံ့တရုတ်အတွက်ဦးဆောင်ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့သံမဏိစက်များ, foundries, alloy စက်မှုလုပ်ငန်း, smelters, ဆိုးဆေး, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်သည်များအဘို့အထောက်ပံ့။
တရုတ်ကိုထပ်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး produ ခဲ့ ...
တရုတ်နိုင်ငံ၏အလယ်တန်းလူမီနီယံအလွိုင်း output ကိုနှိမ့်ချ 5.6% MOM နှင့် ပတ်သက်. 12.9% YOY အသုံးပြုပုံဇန်နဝါရီ 2019 ခုနှစ်တွင် 315,000t အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တရုတ်အဘယ်သူ၏ရေနံစိမ်းသံမဏိ output ကို2မှာ 104,3 သန်းတန်ချိန်ခဲ့ 2018. ဂျပန်အတွက်ရေနံစိမ်းသံမဏိ 928,3 သန်းတန်ချိန်ထွက် churning, တဖန်ကြီးမားတဲ့ margin ကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည် ...
နေရပ်လိပ်စာ: ROOM တွင် 301-2, Hang Seng က Wanchai အဆောက်အအုံ, 3rd Floor, No.200 Hennessy လမ်း, Wanchai HK
E-mail ကို: lily@si-metal.cn
Tips, Hot Products, Sitemap, amp မိုဘိုင်း
Raw Material For Investment Casting, Vanadium-Pentoxide, non-Ferrous သတ္တု, Casting Raw Material, Niobium Superalloys, Metallurgical Material,